सुनको मूल्य घट्यो, आज पनि अचम्मित पार्ने किसिमले घट्यो : हेर्नुहोस् कति पुग्यो ! « गोर्खाली खबर डटकम
सुनको मूल्य घट्यो, आज पनि अचम्मित पार्ने किसिमले घट्यो : हेर्नुहोस् कति पुग्यो !
काठमाडौं, २३ माघ । साताको अन्तिम दिन (शुक्रबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ९ सय ४५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाली बजारमा शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७७ हजार १ सय ६० रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७८ हजार १ सय ५ रुपैयाँ थियो ।
यसबाहेक ‘एक्सराइज’ गर्न पनि सिकाइन्छ। मधुमेहका बिरामी औषधि खान झण्झट मान्नुहुन्छ । यो कुराले उहाँहरूलाई सधैँ तनाव दिन्छ। ‘औषधि मात्र खाएर पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ,
‘औषधिसँगै खानपानमा ध्यान दिइएन भने मधुमेह मात्र होइन कुनै पनि रोग निको हुन सक्दैन।’अर्को कुरा बिरामीलाई मानसिक तनाव पनि भइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मनोपरामर्शको पनि आवश्यकता पर्नसक्छ। सबै कुरा मिलाएर उपचार दिन सके मात्र बिरामीलाई लाभ हुने डा. ज्योतीको बुझाइ छ।पछिल्लो समय उहाँले बिरामीलाई उपचारात्मक खानामार्फत मधुमेह नियन्त्रण गर्न सुरु गर्नुभएको छ ।
डा. ज्योतिका अनुसार यसको परिणाम असाध्यै राम्रो आएको छ। ‘हुन त यो हामीले शुरु गरेको एक महिना पनि भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर एक सातामै यसको परिणाम देखिन थालेको छ।’उहाँका अनुसार यो उपचारात्मक खाना उपचार विधि मोटोपन बढी भएका व्यक्तिहरूका लागि ल्याइएको हो।
‘जो व्यक्ति मोटा छन्, उहाँहरूलाई सुगर नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्ता व्यक्तिलाई दैनिक ८०० मात्र क्यालोरी भएको खानाको चार्ट दिन्छौँ’, डा. ज्योती भन्नुहुन्छ, ‘यसमा भात, रोटी, तरकारी र फलफूल सबै पर्छन्। तर क्यालोरी लिमिट भने क्रस गर्न पाइँदैन।’,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
सुगर पनि नियन्त्रणमा आएको पाइएको छ। हाम्रो उदेस्य सुगर नियन्त्रणमा ल्याएर औषधी खान नपर्ने बनाउने नै हो ।‘हामीले खाएको खानाका कारण शरीमा बोसो बनेर जमेको हुन्छ। पहिला भए परिश्रम गरेर पग्लिन्थ्यो’, डा. ज्योती भन्नुहुन्छ, ‘तर अहिले धेरैले शारीरिक परिश्रम गर्दैनन्। त्यसकारण शरीरमा बोसो थुप्रिँदै जान्छ पेटको गोलाइ बढ्छ र अनेक समस्या निम्तिन्छ।’